“भूमिकाभित्रका मार्सेली” भित्र -
१२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १८:३८ February 24, 2021
देशलाई आवश्यक पर्ने यिनै मार्सेलीहरुले सर्वसाधारणहरुलाई सुखानुभूति दिलाउन सक्छन् । नेपालको पहिचान संसारसामु फैलाउन सक्छन र नेपालको झण्डा विश्वसामु सगरमाथा भएर फहराउने छ ।
खाना, नाना र छानाको आवश्यकता परिपूर्ति पश्चात् मान्छे दौलत बटुल्ने र ऐसआरामको जीवन जीउने प्रयत्नमा लाग्दछ । केही मान्छेहरु आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति पश्चात् जनकल्याणका काममा आफूलाई समाहित गर्दछन् । “परोपकार पुण्याय पापाय परपिडनम्” को सिद्धान्तलाई अंगिकार गरेर समाज भलाइमा लाग्दछन् । “भूमिकाभित्रका मार्सेली” ले दिने सन्देश भनेको मानिसको जीवन संघर्षमयी छ । आफूलाई उचाल्न आफ्नै हात बलिया हुनुपर्छ, गरिब हुनु भनेको जीवनको यथार्थ बुझ्नु हो र यथार्थको धरातलले मानिसलाई मानिस हुन सिकाउँछ । मान्छेको जीवन अनुभवको प्रचुरताबाट तयार गरिने भविष्य हो भन्ने कुराको बोध गराउँछ । मान्छेले व्यक्तिगत स्वार्थ त्यागेर आम मान्छेको स्वार्थका लागि गर्ने कामले नै आफ्नो पहिचान बनाउन सक्दछ । समाज तथा राष्ट्रको उन्नति हुन सक्छ । व्यक्तिवादीहरुको भिडको दलदलबाट निस्कन गाह्रो हुन्छ । पाइलाहरु हिलोभित्र नै तानिन्छन् । हिलोले सबै वस्तुलाई हिलो नै बनाउँछ । हिलोलाई नै उपयोग गरेर सुन्दर जलकमल फूल्दछ ।
निजामति सेवामा आधा आयु सिध्याएका मार्सेलीले यसभित्र सर्वसाधारणलाई सुविधाजनक ढंगबाट सेवा दिनुभन्दा विकृति र विसंगतिले जरा गाडेको देखे । सेवाग्राहीहरु भौतारिनु परेको तितो यथार्थले यिनलाई चिमोट्यो र “निजामति सेवामा नयाँ आयाम” नामक पुस्तक प्रकाशन गरे । सुधारात्मक सोचका साथ गरेका कार्यबाट नसिहत (दुर्गम क्षेत्रमा सरुवा) समेत पाए तर गोताखोर समुद्रमा डुबेर मर्दैन, यिनको अभियान जारी रह्यो । कर्मचारीतन्त्र नै देशको स्थायी सरकार हो, देशको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने पाटो हो । योग्यता र क्षमता भएका व्यक्तिहरुको मात्र पहुँच छ निजामति सेवामा । लोकसेवा आयोग भन्ने बित्तिकै पछिल्ला बेन्चका विद्यार्थीहरुले हिम्मत गर्दैनन् परीक्षामा सामेल हुन, अघिल्लो बेन्चका अब्बल विद्यार्थीहरुको समूहकै पर्याय भने हुन्छ निजामति कर्मचारीको समूहलाई । यसरी मेधावी विद्यार्थीहरुबाट छानिएका संसार बुझेका कर्मचारीबाट अपेक्षाकृत सेवा प्रवाह हुन नसक्नु दुर्भाग्य हो । नेपालमा सरकारी सेवामा गुणस्तर खोज्नु प्याजको गुदी खोज्नु जस्तै भएको छ । उसो त कर्मचारीको कार्यक्षमतामा ह्रास आउन अनेक तत्वहरु सक्रिय छन् । भूपि शेरचनको कवितामा भनेझैं क्यारेमबोर्डका गोटीहरु स्ट्राइकरले हिर्काएर फुटेको, कोत्रिएको अवस्था छ । मिलेर बसेको कर्मचारीतन्त्रलाई स्ट्राइकरले हिर्काएर छरपस्ट पारेको छ । आस्थाको आधारमा विभक्त गरिएको छ । राम्रो कर्मचारीको सट्टा हाम्रो कर्मचारी परिपाटी हाबी छ । नीतिगत समस्याहरु छन् । प्रोत्साहन दिइदैन र दण्ड पनि दिइँदैन यहाँ । मानसिकतामा गम्भीर चोट लागेको छ । तलबभत्ताले जिउन नसक्ने अवस्था छ । समग्रमा भन्नुपर्दा कर्मचारीतन्त्र समस्यामा जकडिएको छ तर यसैभित्रबाट सेवाग्राहीलाई झन्झटरहित सेवा उपलब्ध गराउने कसम खाएर प्रवेश गरेको हुन्छ कर्मचारी र कतिपयले कसम भुल्दै जान्छन् । मार्सेलीले कर्मचारीतन्त्रमा सुधारका निम्ति चाल्नुपर्ने महत्वपूर्ण कदमहरुसमेत सुझाएका छन् ।
अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो उपभोक्ता । यहाँ म्याद गुज्रिएका औषधीदेखि विभिन्न अखाद्य वस्तुहरु उपभोग गर्न बाध्य छन् उपभोक्ता भने अर्कोतिर चर्को मूल्य तिरेर गुणस्तरहिन बस्तु प्राप्त गर्दछन् । यस सन्दर्भमा मार्सेलीले पस्केको अर्को महत्वपूर्ण कृति “पीडामा उपभोक्ता” हो । यस अन्तरगत उपभोक्ताले भोग्नुपरेका विभिन्न समस्याहरुको दैलो उघारिएको छ । बस्तुको बाहिरी प्याकेजिङ प्यान्डुराको बाकसजस्तै छ । बाहिर आकर्षक र खोल्नेबित्तिकै आफैलाई आक्रमण गर्ने जन्तुहरुले भरिएको । विषादीले भरिएका खाद्यान्न सामग्रीहरु छन् प्याकेटभित्र । हाम्रो जस्तो कृषिप्रधान देशमा कृषकमाथि नै शोषण हुन्छ । मलखाद, कृषिमार्ग, बिउबिजनको अभाव, सिंचाईभन्दा पनि पिउने पानीकै अभाव जस्ता समस्याहरु रहेका छन् । उसो त कृषक समस्याको पहाडमुनि अलिअलि अक्सिजन बोकेको वायुको भरमा बाँचेको छ । यिनै कृषकहरु पनि उपभोक्ता हुन् र तमाम उपभोक्ताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आफूसँग भएको कमजोरी चेतनाको कमी हो ।
यही तत्वबाट फाइदा उठाएर व्यवसायी तथा विचौलियाहरुले अन्याय गर्दछन् । बजारमा विचौलियाको उपस्थिति हेर्ने हो भने अवस्था भयावह छ । उसो त कतिपय सरकारी अड्डामा सेवाग्राहीले सेवा बापत कति राजस्व जम्मा गर्नुपर्ने हो थाहा पाउँदैनन्, विचौलियाको ठेक्काभित्र फसेको हुन्छ ऊ र एकमुस्ट रकम बुझाउँछ, भरपाई उसलाई दिइँदैन । सेवाग्राही आफैले प्रक्रिया अगाडि बढाए महिनौंसम्म धाएर पनि काम नहुन सक्छ । अर्कोकुरा विज्ञापनले उपभोक्तालाई द्विविधामा पारेको छ । भनिन्छ गुणस्तरीय वस्तुको विज्ञापन गर्नै पर्दैन । बजार व्यवस्थापनलाई हेर्दा राज्यले बनाएको बजार नियन्त्रण सम्बन्धी धारा उपभोक्तासम्म नपुगी बिचमा नै सुक्ने गर्दछ । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गरी मार्सेलीले स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने महत्वपूर्ण मोडेल प्रस्तुत गरेका छन् । उपभोक्ता हित संरक्षक मञ्चको साधारण सभाले यसलाई “मार्सेली मोडेल” नाम दिएर पारित गरेको पाइन्छ । गाउँघर कुनाकाप्चासम्म बजार अनुगमन पुर्‍याउने, उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम चलाउने, विद्यालयको पाठ्यक्रममा उपभोक्ता शिक्षा समावेश गर्ने, पसलहरुमा मूल्य–सूची राख्ने, उत्पादित वस्तुको उत्पादन र म्याद गुज्रिने समय उल्लेख गर्ने जस्ता विषयहरु यस मोडेलमा देखिन्छ । गुणस्तरीय र उचित मूल्यमा वस्तु प्राप्त गर्नु उपभोक्ताको अधिकार हो र यसका लागि उपभोक्ता आफैं राज्यपक्षको सहयोगमा सचेत भई वस्तु तथा सेवा लिन सक्छन् भन्ने हो । बजारमूल्य निर्धारणमा समेत उपभोक्ताको हात नभएर एकाधिकार मोडेल हाबी छ । व्यवसायीहरुले तुरुन्तै संगठन बनाउने र मागपूर्तिको नियमलाई लत्याउने कारणले पनि उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् ।
मार्सेलीले जागिरको दौरानमा विभिन्न ठाउँमा पुगेर गरेका अनुभवको आधारमा सुविधाविहिन तथा विभिन्न कारणले पछाडि परेका पाटाहरुलाई समातेको थाहा लाग्छ । पूर्वी नेपालमा उत्पादन हुने चिया र सुपारीमा हुने घोटलालाई नियन्त्रण गर्न चिया तथा सुपारीका संगठनमा मार्सेलीको संलग्नता देखिन्छ । विदेशमा उत्पादित सुपारी नेपाल भित्रिएपछि नेपालको ब्राण्ड लागेर फेरि सुपारी बाहिरिने गरेको तितो यथार्थ हामीसँग छ जसले नेपालको उत्पादन कमजोर बनाएर कृषकले उचित मूल्य पाउँदैनन् । संसारमा पानीदेखि पछाडि धेरै मानिसहरुले पिउने वस्तु चिया हो । एकाधिकार तथा अन्य कारणले नेपालमा उत्पादित चियाको मूल्य न्यून हुनु तथा कृषकको उत्पादन लागत (Cost of Production) सम्म नउठ्नुले चियाका उत्पादक मारमा मात्र परेका छैनन् विकल्पको खोजीमा छन् ।
यसबाहेक मार्सेलीले संलग्नता जनाएका तथा उजिल्याएका क्षेत्रहरु धेरै छन् । विभिन्न आठवटा कृतिहरु प्रकाशन गरी आपूmलाई साहित्यको श्रेणीमा अब्बल बनाएका छन् । विभिन्न मठमन्दिरहरुको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने, खोटाङ सामाजिक सेवा मञ्चमा बसेर बिराटनगर तथा काठमाण्डौंसम्म खोटाङलाई जोड्ने, पत्रपत्रिका, रेडियो, टिभी तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जागरण अभियानबाट खबरदारी र चेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने, बशिष्ठ भण्डारी समाजमा रही बन्धुहरु समेट्ने लगायतका कामहरु गरेको पाइन्छ । एउटा बैठकको उपस्थिति बहीमा मैले कृष्णप्रसाद भण्डारी लेखेको थिएँ उनले हस्ताक्षर गर्ने बेलामा मार्सेली नलेखेको गुनासो गर्दै मार्सेली शब्द थपेका थिए । मैले “भूमिकाभित्रका मार्सेली” पुस्तक पढेपछि बल्ल थाहा पाए कि मार्से उनको प्राण हो अनि पो मार्सेली शब्द हटाउन नचाहेको रहेछ । आफ्नो सालनाल गाडेको खोटाङलाई देशविदेशमा जोड्न अथवा चिनाउन खोजेको रहेछ । न्यायका उपासक मार्सेलीको आराधना अवकाशपछिको जीवन सामाजिक सेवामा समर्पण हो । मेरा आदरणीय दाइ चन्द्र भण्डारी भन्नुहुन्छ “अवकाशप्राप्त सि.डि.ओ. एघारवर्षभन्दा बढी बाँच्दैन किनकी हिजोको उसको हाइफाइ आज पाउँदैन र एक्लिन्छ ।” तर अवकास प्राप्त अधिकृत कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली एक्ला छैनन् र उर्जा सकिएको छैन । अझ सशक्त ढंगबाट काम गरिरहेका छन् । असल मार्गदर्शक अभिभावकको छहारीमा हुर्केका मार्सेलीले समाज सुधारका लागि भत्किदै गरेको बग्गी र रुग्ण घोडाको भरमा आफ्नो समाजको महाभारत जित्न प्रयासरत छन् । उनको मेहनतलाई कदर गर्दै नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको हातबाट प्रवल जनसेवाश्री–२०६७ र नेपालका प्रथम महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट समाजसेवा रत्न–२०७५ बाट सम्मानित गरिएको छ ।
भूमिकाभित्रका मार्सेलीलाई पाँच खण्डमा विभाजित गरिएको छ । डा. विष्णुविभु घिमिरे र प्रमोद प्रधानद्वारा भूमिका लेखिएको यस पुस्तको प्रथम खण्डमा मार्सेलीलाई द्रष्टा तथा स्रष्टाको रुपमा नजिकबाट चिहाउने प्राध्यापक, नेपाल सरकारका पूर्वसचिव वरिष्ठ साहित्यकार तथा प्राज्ञ लगायत कर्मचारी संघसंगठनका संगठकहरु मार्सेलीको योगदान तथा जीवनीलाई समेटेर २२ वटा आलेखहरु राखिएको छ । त्यस्तै खण्ड २ मा निजामति सेवामा नयाँ आयाम पुस्तक प्रकाशनताका उक्त पुस्तकमा लागि शुभकामना दिने डा. हरि दाहाल, डा.गोविन्द कुसुम, डा. भोजराज घिमिरे, विमलप्रसाद कोइराला लगायत १५ जना विद्वानहरुको शुभकामना संलग्न गरिएको छ । तेस्रो खण्डमा पीडामा उपभोक्ता पुस्तकका लागि शुभकामना पस्किने राजनैतिक व्यक्तित्वहरु पूर्व प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली, आपूर्ति मन्त्री दिपक बोहोरा लगायत बुद्धिजिवीहरुबाट १२ थान शुभकामना व्यक्त गरिएको छ । यसै गरी चौथो खण्डमा जीवन भोगाइका पाइलाहरु शीर्षकमा कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलीले आफ्नो बालापन, अध्ययन अवधी, जागिरे जीवन सम्बन्धी विभिन्न अनुभवहरु समेटेका छन् र अन्तिम खण्ड परिशिष्टमा आफ्ना उपलब्धीका कागजात तथा तस्बिरहरु समेटेका छन् ।
प्रौढहरुप्रति आदरभाव राख्ने र न्यायका पक्षपाती, विदेश गएर बस्ने अवसर हुँदाहुँदै पनि आफ्ना नानीहरुलाई स्वदेशमै कर्मशील बन्न प्रेरणा दिने, दुरदृष्टि भएका कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेली राष्ट्रसेवक तथा अभियन्ताको रुपमा प्रस्तुत छन् । देशलाई आवश्यक पर्ने यिनै मार्सेलीहरुले सर्वसाधारणहरुलाई सुखानुभूति दिलाउन सक्छन् । नेपालको पहिचान संसारसामु फैलाउन सक्छन र नेपालको झण्डा विश्वसामु सगरमाथा भएर फहराउने छ ।
Total Page Visits: 3599 - Today Page Visits: 2
जोईन्ट हेण्ड शवबहान खरिदको अन्तिम तयारीमा जुट्दै
अदालतको फैसला सामान्य : प्रधानमन्त्री ओली
७ बैशाख २०७७, आईतवार १४:२५ admin 1
३० जेष्ठ २०७७, शुक्रबार ०९:१९ admin3 0